fankalazana ny dihin'ny varika maneran-tany Archives - Lemur Conservation Network
You are here: Home › fankalazana ny dihin'ny varika maneran-tany
Tag Archives | fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany
By Seheno Corduant on décembre 10, 2018 in Bilaogy
Ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany dia hetsika maromaro izay tanterahina maneran-tany mihitsy mandritra ny volana Oktobra sy Novambra mba ho fanentanana lehibe amin’ny fiarovana ireo varika, fankalazana ny maha biby tokana azy eto Madagasikara ary ny fanehoana ny maha zava-dehibe ny fiarovana ny varika sy ireo fonenany. Andiany fahadimy amin’ny fankalazana ny taona […]
By Seheno Corduant on octobre 10, 2018 in Bilaogy
Nankalazaina tamin’ny zoma faha 05 oktobra 2018 lasa teo, teto Antananarivo ny dihin’ny varika maneran-tany, andiany fahadimy, izay nokarakarain’ny GERP. Maro ireo hetsika izay notanterahina. Nanomboka tamin’ny diam-be niarahana tamin’ireo vondrona tanora avy amin’ny sekoly ambaratonga ambony, ireo orinasa ary ireo fikambanana. Ary, nitohy tamin’ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny ANS Ampefiloha, ireo fanentanana […]
By Roger Pascal ANDRIANASY on novembre 22, 2015 in Bilaogy
Niditra tamin’ny andiany faharoa ny fankalazana ny hetsika maneran-tany momba ny varika izay nokarakarain’ny GERP Mada. Faritra maromaro no nandray anjara teto Madagasikara ka anisan’izany ny teto Antananarivo ny 30 sy ny 31 oktobra lasa teo. Ny teny filamatra tamin’ity andiany faharoa ity di any hoe “Varika, Harem-pirenena, Namana tokony harovana”. Fikambanana avy amin’ny sehatra tsy […]